Nzira dzakanakisa dzeGmail | Linux Vakapindwa muropa
Vhura sosi dzimwe nzira dzeGMAIL
Gmail ndeimwe yemasevhisi akanakisa etsamba zvigadzirwa zvemagetsi zviripo nhasi, pamusoro pekuve neakaundi zvinovhura madhoo kune mamwe masevhisi eGoogle, akadai seBlogger, GDrive, Docs, Karenda, Hangouts, kuwiriranisa nharembozha yako neApple, nezvimwe. Asi haisiriyo yega nzira yeHotmail / Outlook uye mamwe masevhisi akaita seYahoo, kune mamwezve uye akavhurwa sosi.
ari dzimwe nzira iyo yatichazopa, tichive yakavhurwa sosi, ivo vanobvumidza rusununguko rukuru uye mamwe acho ane sarudzo dzakasiyana zvakanyanya kupfuura idzo isu tajaira kuGoogle tsamba. Pakati pedzimwe nzira dzatinopa ndedzinotevera:
Roundcube: ndeyemazuva ano tsamba yemutengi yakaiswa pane LAMP server (Linux Apache MySQL uye PHP). Iyo ine yakapusa interface uye inokurumidza. Iyo zvakare inobvumidza kududzira inosvika makumi manomwe mitauro, ajenda, matemplate, API yekugadzira ekuwedzera, nezvimwe.
Zimbra: Imwe nzira inonakidza, interface yayo inoita senge yechinyakare, asi iri zano rinonakidza kurishandisa sezvo iri mhinduro-mune-imwe mhinduro, ine webhu mutengi mutengi uye mail server. Inochengetedzwa zvakanaka uye yanga ichishandiswa nemasangano nemakambani.
Squirrelmail: vagadziri vanorondedzera se "webmail yenzungu". Iyo mutengi isina sarudzo dzakawanda sevamwe vatengi vemazuvano, asi zviri nyore uye zviri pachena. Icho chirongwa chakakura zvakakwana, sezvo chave chiri kushanda kubvira 1999.
Rainloop: Iyo ine yakajeka kwazvo interface, ine zvishoma kuita godo kune vamwe vakaita seGmail. Iyo ine akawanda maficha iwe aunotarisira muemail, iyo zvakare inosangana neFacebook, Twitter, GOogle uye Dropbox kupa chiitiko chiri nani.
Kite: Yakagadzirwa kukwikwidzana takatarisana neGmail, muchokwadi inogona kutariswa sedombo reGmail. Kana iwe wajaira Gmail pamwe ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo, asi ine dambudziko uye ndiko kuti kukura kwayo kunoratidzika kunge kwakamira. Kunyangwe usinga gashire ekuvandudzwa kwegore, zvichiri kukosha ...
Eheka kune zvakawanda, senge HastyMail (yekare tsamba mutengi yakanyorwa muPHP uye pasi peGPL rezinesi), Mailpile (HTML5 nePython pasi peAGLP, yakanangana nekuvanzika uye nekumhanyisa), WebMail Lite (yemazuva ano uye minimalist, pasi peAGPL rezinesi uye yakanyorwa muPHP), uye yakareba etc.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Vhura sosi dzimwe nzira dzeGMAIL
Ingori katsamba, ndeyeZimbra uye kwete Zimba. Mune imwe kambani yandaishanda vakaishandisa seseva yepositi uye yaishanda sedumwa.
Wadii kuisa zvinongedzo ...?
Yekupedzisira Edition maGamers: imwe distro yevatambi